‘बलियो एकता र विद्यार्थीहरूको विश्वास हाम्रो जित्ने आधार हो’ « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७४, आईतवार १२:४८
गुरुदेव केसी (सुमन)
नेपाल विद्यार्थी संघ, कैलाली क्याम्पस
कैलाली बहुमुखी क्याम्पस मुलुककै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालय हो । प्रदेश नम्बर ७ को शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित भइसकेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नेतृत्व गर्ने अवसर आफैंमा गौरवको विषय बन्ने गरेको छ । निर्वाचनको एक दिन मात्रै बाँकी छ । स्ववियुको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिएका विद्यार्थी संगठन तथा उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीब्र बनाएका छन् । मतदाता विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न आकर्षक नारा तथा एजेण्डा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका विद्यार्थी संगठन तथा उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्ने आधार के बनाएका छन् ? र, चुनाव जितेपछिका विद्यार्थी वर्गको हकहितका साथै शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि के–कस्ता योजना बनाएका छन् ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा अनुमोदनले कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, स्ववियु निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका विभिन्न विद्यार्थी संगठनका उम्मेदवारहरूका धारणा प्रस्तुत गरिरहेको छ । यस क्रममा नेपाल विद्यार्थी संघका तर्फबाट स्ववियु अध्यक्षका उम्मेदवार गुरुदेव केसी (सुमन) सँग कुराकानी गरेका छौं । २७ वर्षीय सुमन नेपाल नेविसंघको क्याम्पस इकाई सभापति, जिल्ला कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहिसकेका छन् ।
‘म सधैं कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्नुहुने विद्यार्थी साथीहरूमाझ रहेका छु, उहाँहरूको सुखदु:खमा साथमा रहेको छु’ चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेका स्ववियु अध्यक्ष पदका उम्मेदवार सुमनले अनुमोदनको कुराकानीका क्रममा भने– ‘त्यसै पनि कैलाली बहुमुखी क्याम्पस नेविसंघको विरासत बोकेको क्याम्पस हो ।’ प्रस्तुत छ, स्ववियु अध्यक्षका उम्मेदवार सुमनसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
– पर्सी (जेठ ९ गते) कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव हुन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म पूर्णरूपमा विश्वस्त छु । यस पटक निश्चित रूपमा चुनाव हुन्छ । किनकि, गत फागुन २२ गतेको चुनाव हुन नदिनेहरू पनि अहिले मज्जाले चुनावमा होमिनु भएको छ ।
– तर, फेरि मतदान अधिकृतहरू अपहरणमा पर्ने वा अरु कुनै अवरोध सिर्जना हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ त ?
उच्च अदालतका आदेशपछि हामीले (अदालतमा रिटकर्ता) विपक्षी बनाएका प्रहरी, प्रशासन र क्याम्पस प्रशासन अहिले चुनाव सम्पन्न गर्न पूर्णरूपमा खटेको हामीले अनुभव गरेका छौं । अब चुनाव विरोधी घटना दोहोरिन नपाउन् भनेर प्रहरी, प्रशासन निकै सचेत र सजग रहेको पाएका छौं । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका आम विद्यार्थीहरू चुनावमा होमिनु भएको छ । त्यसैले म सबैमा चुनाव हुन्छ भन्नेमा ढुक्क रहन र चुनावमा भाग लिन हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
– तपाईंको स्ववियु अध्यक्ष पदमा विजयी हुने के आधार रहेका छन् ?
हेर्नोस्, कैलाली क्याम्पस नेपाल विद्यार्थी संघको विरासत बोकेको क्याम्पस हो । हामी संगठनका हिसाबले पनि निक्कै बलिया छौं । यो क्याम्पसको स्थापनामा हाम्रो मातृसंस्था नेपाली कांग्रेसको अहम् भूमिका र योगदान रहेको इतिहास छ । पछिल्लो पटक पनि हाम्रो पहल र अनुरोधमा क्याम्पसमा मेघा हल र एफएम सञ्चालनका लागि कांग्रेसका माननीय सांसद पुस्करनाथ ओझाको संसदीय क्षेत्र विकास कोषबाट ६० लाख रुपैयाँ सहयोग भएको छ । म २०६१ सालदेखि निरन्तर कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी साथीहरूको माझमा छु । उहाँहरूको सुखदु:खमा साथमा रहेको छु । उहाँहरूको भावना अनुभव गरेको छु । यी नै मैले चुनाव जित्ने प्रमुख आधार हुन् ।
– तर, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा नेविसंघ लगातार पराजित हुँदै आएको छ । कसरी बलियो छ भन्नुहुन्छ ?
विगतमा नेपाल विद्यार्थी संघबीच विवाद थियो । त्यसैले पछिल्लो दुई चुनाव र ०५१ सालमा हामी पराजित हुनुपर्‍यो । २०६२ को स्ववियु चुनावको बेला त कांग्रेस विभाजित अवस्थामा पनि थियो । तर, यी सबै इतिहास भइसके । विगत जेसुकै भएको होस्, यस पटक कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा नेविसंघ मेरो नेतृत्वमा एकजुट भएको छ । कोही कसैको कुनै खालको असन्तुष्टी छैन । हामीले सबैलाई मिलाएर समावेशी टिम बनाएका छौं । हामी सम्पूर्णरूपमा एकतावद्ध छौं, त्यसैले पनि नेविसंघको विरासत पुन:स्थापित हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । अर्कोतिर, हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेको अनेरास्ववियूबाट यसपटक विद्रोही उम्मेदवार पनि रहेका छन् ।
– चुनाव जितेपछि तपाईले के कस्ता कार्ययोजना बनाउनु भएको छ ?
हाम्रो पहिलो अभियान कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई सरकारी क्याम्पस बनाउने हुने छ । त्यस्तै, यो क्याम्पसमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्ने छौं । त्यस्तै, अंग्रेजी, वाणिज्यशास्त्र, विज्ञान विषयका अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न पहल गर्नेछौं । हामीले हाम्रो प्रतिवद्धतापत्रमार्फत हाम्रा योजना आम विद्यार्थी साथीहरूमाझ प्रस्तुत गरिसकेका छौं । हामीले विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहज र सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन विद्यार्थी बैंक स्थापनामा पहल गर्ने, विशेष छात्रवृत्तिका लागि छात्रवृत्ति कोषको स्थापना, ५० जना विद्यार्थी बराबर एक जना प्राध्यापकको व्यवस्था, समयमा परीक्षा र परीक्षाफल, क्याम्पस हाताभित्रै बैंक काउन्टर स्थापनाका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं । त्यस्तै, विद्यार्थीलाई आवतजावत गर्न सहज बनाउन फूलवारी र अत्तरियासम्म बससेवा सञ्चालन गर्नेछौं । क्यापसको खेर गइरहेको २७ बिघा जग्गाको सदुपयोग गर्ने योजना बनाएका छौं । ई–लाइब्रेरी, सुविधासम्पन्न छात्रावास, व्यवस्थित र आधुनिक खेलकुद मैदान, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि विद्यार्थीको रुचीका विषय थप गर्दै पाठ्यक्रम पुनरावलोकन र परिमार्जनसहित अनुसन्धान तथा विकास र सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि पहल गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता छ ।
– कैलाली बहुमुखी क्याम्पस सामुदायिक भएर पनि शैक्षिक शुल्क बढी भयो भन्ने गुनासो । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
मलाई पनि त्यस्तै लागेको छ । त्यसैले हामी कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई सरकारी क्याम्पस बनाएर सबैले नि:शुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गर्न जुटेका छौं । यदि तत्काल सरकारी क्याम्पस बन्न सकेन भने शैक्षिक शुल्क कसरी कम गर्ने भन्ने बारे सोच्ने छौं ।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको सरगर्मी धनगढीमा पनि बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी
सबै सरोकारवालाहरूको पहिलो रोजाईको बैंक बन्ने दीर्घकालीन रणनीतिलाई आत्मसात गर्दै बैंकले आम जनमानसको बैंकिङ्ग आवश्यकता,
४० वर्षीय केशव मिश्र राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा निक्कै क्रियाशिल छन् । ०५४ सालदेखि काँग्रेसको
टेकराज भट्ट एनआइसी एशिया बैंकका सुदूरपश्चिम प्रदेश, कार्यालय धनगढीका प्रमुख हुन । प्रस्तुत छ प्रदेश